Coulda Been Me — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Intliziyo yam enzima. Ndiyazi ukuba uThixo ulungile, kwaye Yena olawula, kodwa intliziyo yam enzima.
Kwiveki ephelileyo emva iziganeko Ferguson (kunye neempendulo kuyo ku loluntu sasazo), Ndaziva ukuhlutywa ukuba abhale ingoma. Ndandifuna ukuba enze naziphi na iingxelo uzukileyo nezibhengezo, kodwa ukuvakalisa indlela yonke yandenza ndizive. Ngoko ndaqalisa ukubhala, kwaye oku ke oko kuphuma. Ivakalelwa ukuba evakala engqondweni yam: "Inokuba ubukhe kum."
Ndino ukulungele isithuba yonke indlela amaKristu afanele ukuphendula ngamaxesha ezinjengezi, kodwa emva kokuba iindaba malunga Eric Garner izolo, Ndagqiba ukuba alinde nasemva ukuba kamva. Okwangoku, Ndifuna nje ukuthi ukuba intliziyo enzima. Andinamdla kwiingxoxo okanye iimpikiswano ngoku. Ndifuna nje inkululeko ukuvakalisa ukuba ndihlelwe bububi.
Ndiya buhlungu ngenxa yokuba Eric Garner yevidiyo ndiliphanzisa ukubukela. Xa mna nomfazi wam wokuqala amlinda oko kwiinyanga ezidlulileyo, zombini sadanduluka. Ubomi sisipho esihle, kwaye Ufanele ukuba bagade obomi umzimba bomntu - ingakumbi xa kuthatyathwa ngamanye amadoda. ndicinge, "Ngokuqinisekileyo abantu abanakho ukufumana phelisa loo. Ubuncinane baza kufuneka ukuphendula ngezenzo zabo ityala. "
Ndacinga engalunganga. Ke ukuba buhlungu.
Ndiza buhlungu ngoba yingozi ukuba umntu omnyama eMelika. Ndiyazi ukuba mazwi yedwa zamisa abanye abantu, kodwa loo nto ngokungakhethe oyinyaniso.
Ndiza buhlungu ngenxa yokuba uluntu abamnyama buhlungu, ejingxela ecaleni ngenxa yeemeko ezinzima ezininzi.
Ndiza buhlungu ngenxa wasemzini run-nabazala Ndakhe ebendinalo namarhataa ngaphambili.
Ndiza buhlungu kuba wonke umntu omnyama ndiyazi iye efanayo run-ins.
Ndiya buhlungu kuba rhataa ezimbi kwenza kube nzima ukuba rhataa elungileyo ukwenza umsebenzi obalulekileyo abadla nabizelwa.
Ndiza buhlungu kuba kufuneka ukufundisa unyana wam into enye ubawo kwafuneka ukundifundisa: "Abantu sizakucinga ukuba sele isoyikiso phambi kokuba bazi nantoni na ngawe, ngoko ke kufuneka ulumke ngaphezu abahlobo bakho ezimhlophe kukwenza. "
Ndiza buhlungu kuba abanye abantu abayikhathalele. Baya Ndingathanda kunokuba kuphumelela kokuxabana ngaphezu yokwaphuka abo banitshutshisayo.
Ndiza buhlungu kuba abasemagunyeni abagonywanga isono ukwaphuka ezithwaxa eseleyo kuthi. Xa abo babiziweyo ukuba okuphosakeleyo namapolisa unetyala kulo ngokwabo, phi sibheka? Ndiyavuya ngenxa yokuba umntu mkhulu ukuba sibhenele, yaye ndinethemba kuba uThixo uya kukuphumelelisa okusesikweni ekupheleni. Kodwa ke oko akuthethi mna awuwenzakalisi.
Ndiya buhlungu kuba iintlekele ukufumana amajelo eendaba akunguye kwiintlekele kuphela. Kukho ezininzi.
Kuba abahlobo bam ukuba ningaqondi, Nceda thatha ixesha lokuphulaphula kuvelana. Ukuba 'ngokukhawuleza ukuphulaphula kade ukuthetha' luphawu yokuthobeka ukuqola. Phambi kokuba into, thatha umzuzwana ukuva kwabo abeva iintlungu.
Ngoko ke uninzi lwethu buhlungu ngenxa yokuba sicinga thina ukuba, “Isenokuba ubukhe kum.”
*Funda amazwi ukuze le ngoma Apha
Joshua • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:30 pm • impendulo
waqeshisa ngaso omnde. i ubuhlungu yakho
Cisco • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:30 pm • impendulo
Coulda waba me !!
uYeremiya • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:32 pm • impendulo
I ziye ukuba iingcinga ezifanayo, kwaye ngakumbi malunga nendlela kuhluthwa ubomi kunye nokuba umntu afe ngaphandle kokwazi uThixo. Ngokwenene sizixhalabisa mna kwaye buhlungu mna <3
Shana • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:37 pm • impendulo
Ewe Nkosi, Kulungile
Marco • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:38 pm • impendulo
Ebuhlungu nawe, i dont ukuqonda imeko 100% akukho ndlela. I kakuhle uYesu yaye sifanele ukuze siphile efana. ukuhamba, kusinda, ngeentlungu nilwela.
Sam • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:40 pm • impendulo
Siyabonga ngokwabelana intliziyo yakho, nokusebenzisa italente yakho uwubeke umculo. It sickens kwaye buhlungu kum nje ukuba abantu ukuba uyabulawa, kodwa ukuba baninzi kangaka (kuquka amaKristu amaninzi abathi) Asifuni ukubona kubi sikweni.
“Ndiza buhlungu kuba abanye abantu abayikhathalele. Ukuba kubhetele win ingxabano ngaphezu amanxeba labo limele.”
Ngoko ke, yinyani leyo, uhambo. :(
Thandaza, sithandazela abazalwana bam & odade.
MelissaMcKim • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:40 pm • impendulo
Ndifuna ukuthenga le ngoma!
Wena wathetha into va iintliziyo ezininzi kangaka
Oku nakhonza kum
Siyabulela ngokuba usebenzisa isipho nokwabelana ngayo sonke
Kirk • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:45 pm • impendulo
i am a Native American ukusuka calera, Oklahoma. Mna choctaw Indian kwaye emva kokuva Ferguson kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye wayeziqonda intiyo kunye intlungu kuba kunzima ukuba uhlanga ezahlukeneyo ezikhoyo namhlanje hayi nje ukuba ndiwuthiyile wonke ibala lolusu benza nje inkululeko yethu yokukhuthaza uThixo yaye siphulukana imisebenzi yethu unobangela loo okanye kube kubi kodwa ndiyathandaza ukuba eli hlabathi liza kuba ngcono kodwa ndikhumbula uThixo unecebo yonke nokuba yembi nokuba yelungileyo kufuneka nje ukholo nokuba yinto musa ukuba thina kwakhona siye zixhomekeke kakhulu kurhulumente kunokuba ayame kuThixo !
friends • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:47 pm • impendulo
Love kuni umzalwana. Gcina up ukulwa okuhle. Ukunithandazela.
Jordan • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:48 pm • impendulo
An ingoma emangalisayo. Kufuneka ukuba abantu abatsha ukuva nokufunda. Gcina it up uhambo
Joel Benjamin Neve Island • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:52 pm • impendulo
Mna kanye apha Uganda kodwa intliziyo yam izandyondyo ngokunjalo. nzima. Eric Garner, Tamir Rice, mike Brown. nzima.
DustinSimmons • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:56 pm • impendulo
unikelo Nice elimele ubomi ezimnyama ukuba izinto yaye iza indiva emehlweni zehlabathi. Inkqubo ukuba sele wayama ngexesha lotyelelo lwethu elifutshane on Earth ayiphumelelanga thina, ngokuphindiwe, ukuya kwinqanaba siya kuba babesoyika abantu esibathandayo kunye nabanye. Ndiyathemba ukuba sonke ungacwangcisa amehlo ethu eNkosini batyatyambe abantu kufutshane njengenye, abantu bakaThixo. Hlala bomelele elukholweni kunye nomsebenzi onzima, GAWVI and Trip Lee! Makube lubabalo, noxolo!
Neal_Spencer • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:56 pm • impendulo
Ndandifuna nje ukuba ukuthumela umyalezo. indoda, imbalwa idlulileyo iiveki ibe nzima ukuze nam ityatyambile. Ndingu ipolisa kwaye its been nzima ngokwenene ukubona abanye abantu endizithandayo (Rappers, singers, abahlobo, njalo) ukuthetha ngayo amapolisa indlela eziye. Ekuqaleni ndaba noburhalarhume, uxakekile, yaye ukulungele ukuba uphikise ihlabathi malunga ukuqonda indlela abazange nzima kangakanani umsebenzi wethu, ngendlela eyoyikisayo ngayo ngamanye amaxesha… Ndiyaqonda ndandihlala kwiqamza, kuba okukhona ndifunda malunga nomba, kokukhona Ndathetha abahlobo bam, ukufunda be y'all malunga nendlela sele wayeka ngaphezulu adubule, waba iimoto zakho wafuna ngaphezulu, njalo njalo njalo… I nje ndazibona ukufumana wadandatheka ngokwenene malunga sonke isifundo.
Mna indlela yam kwamfundisi izithuthi. Ndiyeke kuzo ngokusekelwe izinto ngokoqobo 80% ixesha (ukubhaliswa okuphelelweyo, I-inshorensi, njalo) ngokuba oko yam “ukungaboni mbala” indlela nabantu. Ke enye 20% le ixesha ukuba imoto wenza into ibitheni ngokugqithisileyo kwaye lubonakale ndiza ungamkholelwa umntu ngaphandle ebeya kucinga yoqeqesho yamapolisa uyinqaba ukuba umsebenzi kunye nomnqophiso efanayo ngase. Ingongoma ndizama ukwenza ukuba ndizama ukwenza okusemandleni am ukuze uhlale ukungakhethi, ukuze Andenzi etsala imoto phezu kuba sikhangeleka “akukacaci” okanye ngenxa yokuba lo mntu uqhuba ibukeka “njenge thug”. Le nto, Ndiyavuya yantle indlela Ndiye ndizame ukwenza umsebenzi wam, , yadumisa uThixo ngenxa. I guess apho Ndixinezeleke nakuba, kukuba ndiziva ezincinane kakhulu kulo mba BIG. Okukhona ziphikisana, kokukhona ndaphulaphula abahlobo bam Black Arabhu nindixelele ngamabali zabo ukhangelo eyayivela kwaye ubangela kungenzeka etc. kulapho ndaye ndaqonda ukuba babengenalo nofifi nendlela onokubanceda ngayo le ngxaki.
Ndiyayazi ukuba ndimele ukuba sithandaze, yaye mna ndiya kuba ndiyazi ezininzi namarhataa elungileyo ubani obelapho uphume azama okusemandleni abo bamthandayo lo msebenzi ngazo zonke izizathu ekunene… Ke mna mabaqikelele likratshi kum ifuna ukwazi ukulungisa le ngxaki kwaye eme bengasebenzi ngelixa lo mba kuyaqhubeka phesheya America. Yinto indoda nje kunzima… Ngoko ke, I guess injongo yale nothi ukuba bathi, Ndiziva bud yakho intlungu. Ndiva intlungu abaninzi abahlobo bam abaye phantsi umsebenzi wamapolisa eyayivela. Kwaye ngokuba kuthetha ntoni / yenza ukuze, Ndifuna uxolo ngayo nayiphi na imeko kugula wena oya ngomnye wethu. Yaye ke inxenye yesibini yale nothi nje isicelo umthandazo, ukuba intloko yam, ukuba bafumane indlela ababhetele endihlala kuyo, indawo yam yomsebenzi wonke. Kuba nzima xa ubona ingxaki kwaye andazi ukulungisa indlela.
phuzu lokugcina Quick, Ndiyamthanda umntu ingoma. Kwaba ukuba iinyembezi kwindinyana yesine apho Baduma ukuba namarhataa elungileyo. Siyabonga loo ndoda!
Ngothando nangentlonelo kakhulu,
UDanielle • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:59 mna • impendulo
Oku kwayichukumisa intliziyo yam. Siyabulela kuwe ngaphaya ngokunyanisekileyo. I umnqwazi ngokuba unguThixo eyoyika umntu onothando abakhetha imbeko isifungo Wathabatha ukukhusela nokukhonza. Ndiyakucela ke ubuya kuba isithuba ukukhanya kwinkonzo yakho nokuba Beka yakho ukuthobeka nobabalo kukhanya kwezinye amagosa amapolisa ukuze ifumane ithuba lokushumayela iindaba ezilungileyo kuzo. Ukuze ngakumbi inguqu ngumfundi kunye nobunkokheli uza koyisa. Wanga uThixo akusikelele wakho iinyawo nezandla kunye umlomo ukwabelana le nyaniso yonke imihla yobomi bakho. Ngoku uyazi umsebenzi wakho! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • UTshazimpuzi 8, 2015 ngexesha 10:41 mna • impendulo
Wowu! le ngoma ibe self kwaba enzulu entliziyweni kakhulu kodwa inqaku hit ngokwenene indawo. Kwiiveki ezimbalwa emva Ndandisele ndiqhelana igesi nempompo karhulumente ukuba umsebenzi wam ufuna ukufumana igesi ndize ndibone oonothimba ukufumana igesi kwakunye ne ngamnye ndandibona endikuthandayo kuva langoku ukuya akasukanga ukoyika umntu nakuba kuba babengazi ukuba Ungoyika kubo kodwa kuba nje ndiziva ntofontofo, ngokuba ekhula kwi 90 ukuba abe ipolisa ngokwenene ezilindele maqhawe kumava ezifana kweentsipho uhambo kwaye zonke izihloko ingoma olubonakalayo bam kubo ukuba namaqhawe atshintshiwe ngonaphakade. Akukho ngendlela embi nangona kuba ndiyabona ukuba kanye nje njengoko oko ngokwenene ekupheleni kosuku.. A ntu.. Kwaye Ndiyabulela kuThixo, ukuba azivumele ukuba ukubabona njengoko ngenxa yokuba abadli ukubona (kakuhle akukho uke usibone lol) empini e iincwadi ahlekisayo sithandazela ukuba amaqhawe. Kwaye yiloo oko birthed kwezo ziganeko… Ngenxa yokuba phakathi uxinzeleko yam kunye nokoyika kuzo usuku olubi okanye ukoyika nombono wabo zam lomntu kwi impompo gas likarhulumente hoody (nangona oko amakhaza), ngokubeka igesi ngendlela ezingaphawulwanga yonke van white (ungazi ukuba mna eyam yokuthutha abantu abakhubazeke ngengqondo ukusebenza),kwafika eli imfesane uziva kakubi ngabo kuba babe ukoyikwa kwam ukuba ukuba umntu omnye ngokumtyhola kunye / okanye ningandiqumbisi ukuba basebenze ngaphandle kwesithuba phandle uloyiko ubomi babo kunye negama. nje imeko yayo jacked up oko ngokucacileyo ululagilo kotshaba ukubangela iyantlukwano ukuze sihlale Yazahlula umzimba kaKristu akayi kuba njalo kwi ngamxhelo mnye Ngenxa uyazi oko kwenzeka xa oko kunjalo. Kodwa obuncinane ke siyazi ukuba, xa athe wenza ukuba kudala 23 nonyaka umthandazo ubudala amaqhawe oyindoda abasabambelele nto okanye into ngaphantsi kwe iNkosi uYesu Kristu kule mihla yokugqibela nokubi. Neal I Sinqwenela ukuba nibe nje kuhlala kwaye yonke imeko ukuze ungene nokuba umoya iya indawo ekuthethelelayo njengomntwana theMmost uThixo ophezulu. Usikelelke!
kevin • EtiMnga 3, 2014 ngexesha 11:59 pm • impendulo
Hey uhambo.. kwakungayi na kwaba ukuba uThixo wavuka isandla sakhe phezu kwakho. I belive ukuba yonke into yenzeka ngenxa yesizathu. Eli lithuba lakho ukuba uxhumane nabantu abaninzi ngoko nanini eya kucinga. Abantu bafuna iimpendulo kufuneka nje guy beze kunye yaye spred ivangeli ngomculo, isifundo seBhayibhile okanye ukuhlala phantsi nje nokuba intliziyo yintliziyo phezu coffee. I guess into endizama ukuyithetha njengoko Andy Mineo wabeka “Thina livin kwihlabathi mnyama kangakanani ke, ngob 'bazi ukuba awubeki bozuko lwakhe ukubonisa ukuba iyabonisa makubekho ukukhanya”.
la • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:03 mna • impendulo
Siyabonga ngalo lonke umculo wakho. Wena kanye yonke 116 nqakraza. UThixo usebenzisa ngokwenene guys uthethe kum kunye nabanye abaselula, kodwa nakwizizukulwana ezizayo! Ndiyathemba ukuba ngenye imini, Xa uThixo evuma, baphume ukukunceda ngaphandle kwezo iindawo ezimagqagala wena echazwe kwenye ndlebe zakho.
Quentin Holland • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:04 mna • impendulo
ingoma Onamandla…. Intliziyo yam enzima ngoku kokuba uyise 3 young namadoda ase-American. Babona ukuba babe nethuba lokuba ngumongameli waseUnited States kodwa baqonde ukuba ukuze baphile ukuyenza phantsi kweemeko ezithile…
Yinto ok ukuba buhlungu. Ihlabathi lizele ngokudlulisa….
amanzi (uMoya) kwaye uNyana (uYesu) angavumela into entle ukukhula….. Ithemba lam likuso
Tjay • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:14 mna • impendulo
Izandla phantsi ibala. Le track ufumana ngokucacileyo ingongoma lonke. Ezi zimo lusizi engenakuphikiswa nentliziyo yam izandyondyo. Ndingu oyindoda emhlophe kodwa ndakhulela kulo abantu umbala. Nkqu bomkhaya kuyinto umbala. Ndakhulela kwenye Kwiindawo ilukhuni e Providence, icala esezantsi ngasezantsi RI kwaye ndiqonda kakuhle sikweni eyenzekayo kwilizwe lonke. ukuze “ukukhusela nikhonze” kufuneka makube phezu kwezinto zonke amagosa sikhumbule nokuba eluhlaza, luhlaza, olumnyama okanye olumhlophe. Imbali kuphinda kuphela ngokwayo xa abantu awutshintshi… Ndiyathemba oku kuza lufikelele esiphelweni nabo bonke aba bantu, ukuba ziye buhlungu kule nqubo ukufumana uxolo. #AllLivesMatter
ken • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:25 mna • impendulo
Ndininyamezele u bro yam, jus KUFUND iposi wakho nam iinyembezi. biso 25 konyaka ubudala Mexican kunye nomntu iintliziyo zam ziye burddened ukusukela ukuba mike umnxeba emdaka, Popz yam ibona COP izinto abanjalo oku kundenza Ungakhathazeki kodwa ndiyazi ukuba ngubani ibandakanya ukuba. Ke sibona lo namhlanje jus bro cryd yaye sithandazela ukuba eyabe wavuswa ngenxa yesivuno. Yinto isizukulwana bhuti letz sethu ukugcina ngokucindezela kuye! Uthando u bhuti
meldd • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:33 mna • impendulo
Ukukhula, Ndandiqala ukubona nto yenzeke loo nto indenze ndacinga ukuba ubuhlanga kuseyimfuneko macala. Ndandiyithanda bonke abantu idolophu yam yonke wavakalelwa efanayo (okanye ndacinga njalo).
ngoku, Ndibona zonke ezi ntlekele&kokuvutha komsindo. I angagqali bantu bekunye nam kwakhona. ntoni oku konke kwenzeka kanjani ukuba kuthi? Ndandicinga ukuba babe elidlulileyo le..
Lena • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:36 mna • impendulo
namandla: lyrically kanye musically. Andiyi kuhamba neelebhile, thina sonke singaboni baza basilela kuzuko lwakhe. Ke mna intombi emhlophe. Kangangoko Ndingathanda ukucinga umbala ayibalulekanga-ngayo kwiindawo kweli lizwe kunye nehlabathi. Njengomoni: kuyo coulda waba nam. Njengokuba intombazana emhlophe ihlwempu: ingayiyo, kodwa ngeke. Kwaye oko ukhohlakele buhlungu.
Ndiyayithanda indlela le ngoma iphela: Ithemba lam likuso. Seluxolweni nokuzamkela kufika nini ithemba lethu, ukholo, yaye uthando kuye.
Miguelperez • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:55 mna • impendulo
Yiyo le into enjalo entle nina wabhala kwaye unenyaniso yaye Ndiyavuya kuba uye wasabela oko ukukhathaza entliziyweni yakho malunga nale miba kwaye ukuba uvule amehlo am ngakumbi kwimiba zobundlobongela angqonge i U.S. leyo abanenjongo ngoyaba okanye nokudelela njengento ebalulekileyo. Enkosi uhambo lee.
Damian • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 1:01 mna • impendulo
IMac • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 2:13 mna • impendulo
indoda, I ukufunda amagama wakho kwangobu busuku. Bandibetha nzima. Lo mjikelo ukhohlakeleyo eli lizwe kuyo…Amaphoyisa nokuva kujoliswe abantu abamnyama ngenxa yokuba ilingane iprofayile…abafana abamnyama bakhathele yokuba ekujoliswe emi nokuthetha baya kuba baziqwebela…
Uyabona, uhlobo yethu kuzisa nayo ke utyekelo compartmentalize amava ethu. Umntu walunywa nenja njengomntwana, Ngokuqhelekileyo ukhula kunye nenzondo kuzo zonke canines…nokuba saba okanye intiyo. Oko kunokuba nzima ayoyise, kuba sivumela ezo mvakalelo…ngamanye amaxesha akhuthaze kwaye ndobadlisa hlisa bezinto.
Tripp, Ndiyavuya amhlophe. De unyaka wam weBanga lesi-4, Ndakhulela njengomnye izandla encinane yabantwana abamhlophe kwindawo ubukhulu becala omnyama emazantsi Illinois. Bonke abahlobo bam abamnyama. ngelo xesha, safudukela Tennessee. Ndade ithunyelwe kwi-ofisi yenqununu kathathu ngonyaka ngokulwa kunye nomntu yehlise “N-zwi”…IN THE 4 IBANGA…abantwana sele bafundiswa ukuba lokuhlela ukhangele phantsi kwabanye….ngenxa yebala lesikhumba. Elo zwi yakwata kum…ukuya kwinqanaba ndiza Babesinqinda kuwe umlomo Ndikuthetha. Usaqhubeka infuriates kum…Ndithandaza nje kunokuba umthwalo ngoku.
indoda, I unezihlobo kuzo zonke umbala nomthunzi yesikhumba….kwaye, uyakwazo oko? I Ndineqhayiya IT. nenzalo yam kanye yintoni eyenza Melika omkhulu. Intsapho yam kwembiza ephuphumayo yokunyibilikisa American. Intsapho yam iyamangalisa Ndizithanda bonke.
A Kwiminyaka embalwa edlulileyo, Ndiye kolona mtshato ezimbi yaye mpilo yam, yaphela ke ukuchitha ixesha elithile emva kwezitshixo kwaye ngoku irekhodi angu. Ndiye ndabona nefuthe namarhataa ezimbi lokuqala-ngesandla. ngoku, kunini imoto patrol ufumana emva kwam okanye igosa ehamba ngaphambili kum, Endicinga, “Yintoni na ke ndizokuyenza eli xesha? Yintoni na ke, ngob ndaxhwitha ukubanika isizathu sokuba kundikhawulela. Ngenxa xa besazi ukuba kwinkqubo…wena a mthetho ubomi.” Kwaye ngoko ke kufuneka ukuba baguquke ngokuba nesidima libanzi nguzwi. Bathi omnye apile embi bonakalisa eli qela, kodwa uThixo akamvumelanga ukuba nathi umfanekiso apile…Wenza ngokomfanekiso wakhe. Oko Imelwe ukubala into, kunene?
Nyaniseka, Bro…emva kokufunda amazwi akho nokucamngca phezu kwabo, abe emana ekhangela kokusemva ebomini bam….ukuba akwazi ubukhe me, kakhulu.
Anditsho ukuba olova okanye ukuthatha kude bekukubi amazwi akho. Yinto nje eyahlukileyo. Kukho ingxaki, kodwa umba abamnyama nabamhlophe akuyona omnyama & impikiswano emhlophe. Wonke umntu wahlukile kwaye isenza ngamava abo obomi ukuqoqosha imbono yabo yeli hlabathi bewile siphila kulo. Ingxaki isono. Thina sonke netyala kulo. Ndiyabulela kuThixo kukho amadoda apho ngoku ukuba ningabevayo na iLizwi laKhe kwaye bazama ukunceda aphilise. Ndinento wena kunye nabanye abaninzi kangaka emithandazweni yam ngobu busuku. Uthando oluninzi.
IMac • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 2:17 mna • impendulo
“Ke bona ubulumko baphezulu ukuqala bunyulu, bandule ke bube boboxolo, mnene, elinganisela, buzele yinceba neziqhamo ezilungileyo, abunamkhethe naluhanahaniso. Kwaye Isiqhamo ke sobulungisa sihlwayelwa ngoxolo ngabo benza uxolo.”
Jamie • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:18 mna • impendulo
Ndiza diggin ngayo. ubone ngokupheleleyo apho uya uvela Tripp.
Stephlandry09 • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 6:42 mna • impendulo
Nangona Andikwazi abhekisele kule konke konke ukusukela Ndingu ibhinqa eliselula omhlophe, ababa iinyembezi amehlo am. Intliziyo yam iye yaba nzima ekuhambeni Ferguson kwetyala lonke. Enkosi uthetha kule nokwabelana ngamava akho.
AaronCrim • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:23 mna • impendulo
Siyabonga UHAMBO, Ndafumana oku ukuze ibe luncedo. Nam ngokwam ndingumntu emhlophe umKristu Wv, Ndiye kwakunzima phezu ntoni ukuze ezi ziganeko. Hayi ngokwenene badidekile, (njengoko ngokwenene ukuba aziphazamiseki mna ngqo) Mna ke ziye lusizi ukubona kangaka abaninzi abazalwana bam noodade ngeentlungu yahlulelana. Lusizi ukubona kangaka abaninzi zamakowethu ukuyiphatha. Enkosi kwakhona tho oku kuye kwandinceda ukuqonda ngakumbi kancinci yaye nam ndiya kukunceda ukwazi ukuthandaza indlela engcono umanyano noxolo. Inkosi ikusikelele
jeanine pinkney • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:29 mna • impendulo
Enkosi kakhulu le ngoma. umzalwana wam owandithumayo ikhonkco kunye im ngokwenene nombulelo ngale ntsasa ngenxa yale ntsikelelo. Ukuba ndinguye ixhoba, Ndilahlekelwe nyana wam Rashad Pinkney Disemba 21,2013. Ukuze ongenangqondo ubudlova gun. Yinto lihlazo indlela kuthatha ubomi bethu. Mnyama ku ulwaphulo-Black yindlela eqhelekileyo yobomi ekuhlaleni. Ke abaninzi abantu bethu abatsha uxabiseke ixesha lobomi. Ndiba buhlungu njalo kuba sele uthathe uvuyo lwam, I buhlungu ngenxa yokuba akukho uxanduva, Ndiba buhlungu kuba andiqondi, I elimele!!! Kodwa ke esidla ubomi kwaye uThixo wam!!!
TerryMiller • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:40 mna • impendulo
Uyazi, uhambo, Andikwazi nto ngendlela enye okanye ngenye malunga yonke ubunzulu umba. Ndingu umntu omhlophe. Mna andiboni ubuhlanga njengendoda omnyama wenza. Andigqithanga wahlala kulo. kodwa, into endiyaziyo kukuba, le ngoma a hit. Ekwaziyo ukuba hit enkulu, Ndiyacinga, xa kukhuthazwa imigudu. Ngenye indlela, ya'll babonakala ezintle indawo nge leyo, ukuze uthathe nje eyongeza, dude. Hayi, Andiqondi ukuba umntu kufuneka kugxininiswe kwi imeko ebuhlungu. kodwa, xa ukholelwa ukuba oko ngoku eyaziwa wambona, ngoko ayidlale. Yinto ubomi benene izinto uthetha apha. Nonke Fikelela amagcisa kufuneka ndinikhululele albhamu elihlanganisayo okanye Compilation. Mhlawumbi ngisho e.p. Zisa ulwazi kakuhle ngaphandle zonke izoyikiso ukuba amagcisa wempangelo amenze itafile. Ngenye indlela, umsebenzi omkhulu apha!
Henry Strozier • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:00 mna • impendulo
ingoma Great! Enkosi ngokwabelana intliziyo yakho nathi! Oku buhlungu kangangokuba! Ndithandazela iintsapho ngamaxhoba!
Louis • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:04 mna • impendulo
Enkosi Uhambo, oku kuhle ukuba umphefumlo wam.
Alasdair • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:15 mna • impendulo
Enkosi Uhambo kwintlaka Farrakhan.
Jacqueline Lugo • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:42 mna • impendulo
Intliziyo yam waphula ukuba iindlela zeli hlabathi. kobulungisa enkulu kakhulu! Intliziyo yam enzima. Ndilinde ngomhla xa uYehova woza amabango abantu bakhe. Xa kuya kubakho ntlungu ngaphezulu. Akukho ukubulala ngaphezulu. Akukho iinyembezi ngaphezulu. Intliziyo yam ingakubamisi-ntsapho nganye elahlekelwe umntu omthandayo ngezi ndlela yeengxaki nogonyamelo. Enkosi hambo amazwi akho nentliziyo yakho
Alasdair • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:43 mna • impendulo
Dillon Taylor wadubula e Salt Lake City. akukho sixhobo. akukho mthetho. Ningazi uhlanga pimp.
uncuthu lwengoma • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:43 mna • impendulo
Enkosi ngokuthatha ixesha ukubhala ngalo. Yinto umbono andiyi kuva rhoqo kwaye ngokwenene nto kwafuneka ukuba acinge kude kutshanje.
mike • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 9:35 mna • impendulo
@alasdair ingongoma esenza, apho uzama ukuba behle nje wathi kwi ingoma, kukuba amapolisa ezimhlophe kufuneka wenze wenze uqikelelo babantu abamnyama ukuba alungile. Ukuba ezimhlophe kwanokuhlala elinye icala usapho lwam ukuba ucalucalulo, kunye nezinye icala yiloo ngokungaphelelanga African American, Ndikuxelele oko Trip wathi kuyinyaniso. Kwimeko ka-Dillon Taylor, leyo Ndimele ndivume yenye amaxesha ambalwa Ndakhe ndeva into enjengale zenzeka, kusenokwenzeka ukuba into efanayo. Yohambo uthi kukho kusekho ngumbandela ubuhlanga nokuqala ugwebe kweli lizwe, kwaye ngenxa one. Loo ingxaki nje uhambe ngendlela enye, kodwa le ngoma ngokwayo uthetha malunga nomba njengezona nkalo zitshisa ibunzi ngasekunene ngoku, leyo bhubhani abafana abamnyama baphathwa ngokungekho sikweni kuba ilingane bazibandakanye. Uya bakholwe into ofuna, kodwa sibona lo mba, kwaye siya kuma nxamnye nayo, ukulimaza kunye labo limele.
Henock Aristide • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Kakhulu Ilusizi kuqhubeka ntoni. track Nice Tripp.
@TheRealChrisZ • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 9:55 mna • impendulo
Sithandazela ukuba impiliso noxolelwaniso nguYesu kuphela ukuzisa!
Idla • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:30 mna • impendulo
Ndicinga yayo ezingakhuselekanga yingozi ukuba libhinqa elimhlophe hayi umntu omnyama. Mna yobuhlanga kodwa uninzi zolwaphulo ukuba commited kum, usapho lwam, kunye nabahlobo bam, sasingabantwana amaduna abamnyama. Ndinqwenela ukuba wasnt kuyinyaniso, kodwa ke.
Thebiggerpicture • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:49 mna • impendulo
Kwakutheni umelana ukubanjwa? Akufanele ukuba bafa, kodwa akufuneki ukuba amagosa umelana nokuba. Hayi, ukuba wayengenakuba na xa uthobela lo mthetho. Yintoni Kufuneka amagosa uyenze ngokwahlukileyo? Vumela abantu aphule umthetho, ukuxhathisa yokubulawa uye nje ngosuku lwabo? Xa Siphela? Nimbonile na manani zakutsha nje? EZINTATHU AMAXESHA EZINYE abamhlophe zibulawa ngamapolisa abamnyama. AMAXA AMATHATHU. Vumela ukuba ukukhanya. Andiqondi ukuba abamnyama ukuba kujoliswe. Ndicinga ukuba mibi, iphanga betshisa izinto phantsi uza kwenza abantwana emhlophe ngebala (bc ukuba akubonile konke oko kwi tv kwaye ukuba ucinga ukuba bonke abamnyama ukwenza ukuba) kwaye ndicinga ukuba abantwana abamnyama uza ukucinga ukuba kulungile ukuba benze ngolo hlobo. Musa ukunika amapolisa isizathu sokuba “profile.” Musani ukuyenza iindawo abamnyama nxalenye ingozi yonke imizi. wonke (yonke imibala) kufuneka uyeke ukucinga ukuba ngaphezu komthetho kwaye akukho nto iya kwenzeka ukuba makayiqhawule. (ingoma Good, nangona… uneempawu)
mike • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 9:08 mna • impendulo
Nceda uthathe ingqalelo yokuba kukho ngaphezu 3x njengoko Caucasians amaninzi kwanjengokuba kukho abamvelaphi yabo iseAfrika abahlala kweli lizwe.
Oku inika ucazululo umlinganiselo ukubulawa ezisekelwe zingaphi uhlanga ngalunye baphile apha.
MichellH • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:53 mna • impendulo
uhambo, le yeyona ndlela yokusombulula lo mba, ukuxoxa, ukuthetha ngeemvakalelo, bavula nokuthandaza! kodwa abe ezonda…Enkosi!
Mna ophakathi kweminyaka umfazi omhlophe. I banembono eyahlukileyo kakhulu. Kwakhona uyahlukunyezwa njenge obhinqileyo oselula emhlophe (zeSexual Harassment njalo) , kwaye ubunzima calulo nangezinye iindlela. Ngokomzekelo ukudluliswa ngenxa imisebenzi ngenxa yokuba abatyebe nakuba kakhulu abafanelekayo. kodwa, I ungaze uvumele oko ukufumana nam phantsi kuba omnye kuphela ukuba bahlabe is Nkulunkulu, yaye loo nto ukuzama ukufundisa abantwana abancinane mna ngeenxa. Thina senze konke nobandlululo, Yethu sonke, ngendlela ethile okanye enye. Kodwa yintoni nazo abantu abamnyama engozini ubomi babo, Ndicinga ukuba yeyona ngongoma ezininzi zizama ukufumana lonke.
Twiceborn • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:54 mna • impendulo
Imizuzu phambi Ndabona tweet zakho athunyelwa FB
“Ngamanye amaxesha ndiye umqulu TL yam & ngempela ukuba athandaze.
Andiqondi amadlala i unchurched kodwa amanye amaKristu ukuze Inconsiderately Nonempathic #ButGod”
Wena Unyanisile Mzalwana Trip.. buhlungu Kwalo mna buhlungu..
I dont bafuna ukuba ingxoxo okanye ukuphikisana.. Ndiza kuthandaza nje uxolo nobulungisa umntu.. #CrazyWorld
UJ • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:04 mna • impendulo
uhambo, Ndicela uxolo ukuba intlungu zakho kwaye nangenxa intlungu enkulu ukuba lonke uluntu Afrika American / Black kufuneka ngaphakathi ekukhanyeni ngesiphumo kugulisa izolo.
NjengomKristu emhlophe, Nam ndingathanda ukuba ahambe nawe ikhwelo kubulungisa abambalwa ezifana ngokwenu. Kwaye Bendinga nam ndingakhe bathi njengoko ndabaphaphelayo ukuba ividiyo Eric Garner sibulawa kwiinyanga ezidlulileyo, kuba nje imizuzu embalwa, Mna ngokwam abeke izihlangu zakhe kwaye uzive nokungalungi.
NjengomKristu na ke owaphukela kwiinkalo ubutshaba zenkolo yokwanda, Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba sonke ukuba siqonde ukuba xa iqela lethu kwakhona uba ekujoliswe ukuba amagosa asebupoliseni abangenamthetho, siya kuba kwi indima efanayo, kakhulu. Ngowuphi nje esinye isizathu sokuba kufuneka ucinezele ubulungisa.
Kufuneka cinezela unyango ngokulinganayo komntu wonke – yamalungelo oluntu. Asimele ukwamkela imeko. Okokuqala ngqa ngokuphathelele abazalwana bethu noodade African American / Black oluntu, kodwa ukuba uluntu lwethu luphela. Asikwazi ukuphila kwilizwe nguzwilakhe. Ngamana sonke sifunda izifundo ezininzi ukusuka nentlekele yokubulawa Eric Garner kaThixo. Enkosi.
Ben • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:14 mna • impendulo
Into ukuba ndiyamthanda kakhulu ngale ngoma kukuba kunyanzela ukuba ndizive lo mba ngendlela amagama nje akazange. Ndiyabulela kakhulu kuba ngokunyaniseka ebhenca ubutshinga ngentliziyo yam kwakunye okuhlawulela uMsindisi enkulu.
Ukuthandaza ngesandla sam emlonyeni wam.
Pamela • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:21 mna • impendulo
Enkosi ngamazwi akho, uhambo. Ndimthanda ube njengendoda, ngummi, kunye Amakholwa. Amazwi akho bezisoloko wachukumisa umphefumlo wam kwandenza ndacinga. Imithandazo ukuba sonke. Uthando oluninzi.
RyanH • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:35 mna • impendulo
Ngaba le mbono lokwenyaniso? Ngaba ikho zithetha njani ukuba akukho nto ukuxhasa ingcinga? Sonke siyazi ukuba amazwi ezininzi iingoma rap kule mihla. ngqo wayo kwelabafileyo, yaye ebangela abo bamphulaphulayo ukuba ihlale esihogweni. Ukuba ubona inkcubeko yabantu ukumamela iingoma malunga COP lokubulala, yezidakamizwa, lokubulala, ukweba, ukuba nobudlova, ukuba ixoxe, yayo lula ukuqonda ukuba ukuze babe notyekelo ngaphezulu ukuba enze ezo ngamacala ulalela. Ingaba kukho ubungqina manani ukuxhasa abukho? Ewe. Ngaba bonke ubungqina ukuziphatha yamanyala kulo rap nenkcubeko kaSathana kwimizi ngemizi? Ewe. Ingaba uninzi lwabantu kule black inkcubeko? Ewe. Thats isizathu sokuba bazibandakanye…Ngaba abamnyama kuphela? Hayi, kodwa zonke ibala lolusu, kodwa predominately abamnyama. Ngoko alo umba yenkcubeko apha kwaye HAYI Umba ngokobuhlanga, yaye kwenzeka kanye ukuze inkcubeko sithetha kuvezwe abamnyama. Ngaba ngokwenene ulindele abantu ukuba abathetha ngayo, xa ubunyani umcimbi ukuba eninzi lwamatyala (hayi zonke) ilungelo lalo? Baxelele ukuba lo marine e Afghanistan ngubani obona ekhangeleka ngathi ou owabulala izilimo wakhe kwiveki phambi. Umxelela ukuba ayeke ingcinga. hayi ubuhlanga yawo, alo utshaba lukaThixo wethu ngubani lokonakalisa umonakalo phezu kwesi sizukulwana abamnyama ngokusebenzisa hip-hop kunye namajelo. YILWELE BACK KWIINGCWELE.
Thebiggerpicture • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 1:01 pm • impendulo
Yiloo nto ndihlala ndisithi kakhulu! Musa ukuvumela makubekho stereo-ntlobo kwindawo yokuqala. Kwaye apho kukho isizathu!
RyanH • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 5:45 pm • impendulo
Kufuneka sivume ukuba kukho ingxaki apha. Kufuneka sivume ukuba le nkcubeko hip-hop (xa ndisithi, I mean rap wempangelo ukuba zonke ngokuphila ezimdaka) iye yonakalisa uluntu lwethu. Kufuneka ukuba ukugxeka “ubuhlanga” njengoko ityala le nezehlo ezibuhlungu. Inyaniso kukuba inxalenye enkulu kuluntu olumnyama kuphenjelelwe kakubi umculo. Its kuphela uluntu emnyama, lonke ihlabathi yayo, kodwa ngenxa yokuba uninzi lwezi rap ezimnyama, abamnyama bakhombe bona kunye nabo.
Thina njengamaKristu kufuneka ukuba ibe ngabo eziphembelela emhlabeni, ngenxa zehlabathi. Ihlabathi kufuneka kubona ithemba lozuko kuthi. Le kuphela kwendlela siya kwenza umahluko kweli hlabathi, izanya-zanyiswa ongendawo.
Izixhaso kuwe uhambo Lee ngenxa eziphembelela uluntu abamnyama kunye nabanye abaninzi ngendlela ekhokelela kubomi lokwenyaniso. Ngamana singangaze silahlekelwe olu uthando ihlabathi luyasinyanzela ukubancamela abazalwana ubomi bethu ngenxa yabo,.
Nje enye intombazana emhlophe • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:47 mna • impendulo
Beautiful iimvakalelo, entle…Ndiyayithanda! Ukulishumayela kwaye ukhumbule inkululeko ukuthetha ezifana, uthando beats zakho, ukuthanda zonke 116 nqakraza umculo, ubuhlungu ngenxa ya'll, Yep I ukwenza. Akazange aphile onjengawe, ukuba yindlala ewe, qhuba njenge ewe ongumKristu, zingacalulani esikolweni osisityebi ewe, wahlaselwa njenge mhlophe onke ebumelwaneni black n baphangwe kunye umpu ilayishe ewe, behlaselwa kweebhasi zesixeko babamnyama ewe, nazo PTSD kule uchuku ewe, etywaleni wathatha ebuntwaneni bam, gadalala senzeke ndimsulwa ukhula smokin kunye nabazali bam ixesha lethu quality ewe, elikhuselayo wam umama-ubizo 911! Komama impumlo waphula, Utata wafaka phezu ziliminxe, ezintlanu yr intombazana endala ekhala STOP! igazi kulo lonke, Dimoni emhlabeni, Ndingu intombi enkulu ngoku. Wanditsalela ngaphandle, yebo Wenza! Ukususela muck kunye eludakeni! Ukusuka sex, iziyobisi, ukufa, nenkohliso, ukusilela, Wandikhusela yena uNdikhoyo, ngenxa yokunqwenela okungcono. Sonke ubuhlungu, masenze niyilwele nhe enye! Sonke abe nobungqina, nokuba rascism ukubhuqa ngokwesini(crae),utshwala, mkhuba, ukuhlupheka, ukuphikisana ebuhlungu, kodwa ukushumayela INYANISO kunye UTHANDO umzalwana kuKristu! Yintoni esinokuyenza? Yenza into uyenze! Uthando kundithanda wena! zombini iindlela, AmaKristu vuka! Love uthando uthando INkosi!
Onyi • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 11:50 mna • impendulo
uthando indlela real le
Bill • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 12:08 pm • impendulo
Trip umzalwana, Ndadibana kuwe zaseCedarville kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye wayesoloko emthanda yaye kukhuthazwe umculo wakho. intetho yakho beshumayela mkhulu! Ndiyathemba uya kuqwalasela kwelinye icala ingqekembe. Xa nithi 'It coulda uye'…kufuneka uqonde ngendlela efanayo ngendlela kusenokwenzeka ukuba mna, kwaye mna indoda emhlophe umshumayeli endala. Ukuhamba phantsi izitrato kwizixeko ezikhulu okanye kwiidolophu zasemaphandleni, sonke siya kuba ngamaxhoba ucalucalulo kunye nentiyo…nje ngenxa yebala lesikhumba sethu…kungakhathaliseki ukuba isimilo sethu okanye into oyenzayo ngelo xesha. Yinto ngokoqobo ezimnyama ukuwa nesono.
Kodwa kwelinye icala….ke ubungeke yini’ ziye nina ndabanjwa aze abulawe nasezitratweni ', ngokuba ubuya uye wasabela igosa njengomKristu, kwaye umntu ohlonipha nothobela abasemagunyeni ukuba uThixo le yabamisela, njengoko umpostile uPawulos akazange. Ukuba uhlola iimeko ngalinye kula madoda ekhankanywe, Kucacile ukuba wenza ukhetho ukuze sixhathise, bangamthobeli, ukulwa okanye ihlasele leo lowo wayesenza umsebenzi wazo ukuba icala ngokwenza ngokuthembeka. Yaye ngoxa igosa linakho ukuba unetyala bias, ubandlululo okanye inzondo, ukuba isisulu ibiba nomthetho, ukuba kunjalo ibizakuba isaphila kwaye bakwazi ukulandela nayiphi sikweni nxamnye nabo enkundleni. Sonke zixhomekeke kobulungisa….nendlela esisabela ngayo kuyo….rhoqo lulawula isiphumo….njengoko wenzayo ngalinye kula matyala ezibuhlungu.
Enkosi kokuqwalasela lo, kwaye ndiyacela zive ukhululekile ndilungise ukuba unayo akulungile, okanye ukuba icebiso yam lonto okanye ngokuchasene iimfundiso zikaYesu ngokwaKhe. UThixo akusikelele nawe umzalwana wam, size sisebenze kunye ukuphiliswa….ukuba lidala.
Stephanie • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 1:30 pm • impendulo
Ubomi buxabisekile kangaka. Siba buhlungu mna ukubona indlela ubomi babantu ekuhlaleni asibanjelwa noku efanayo nezinye iintlanga. Akukho mntu ufanele ukuba wadutyulwa okanye uxakwe ukuba ukufa. Ukuphumla ukuqinisekisa abo bacinga olu hlobo lokuziphatha uya ngoyaba nguThixo wena ashaye. Ukuba indoda leyo ayiyi kuma ukuba yintoni na elungileyo uya kuziphendulela ophezulu. Trip Lee….intlungu yakho / intlungu wethu wokwenene ngaphandle kwamathandabuzo. Ke uNdikhoyo uya kusiva aze aphendule ngokuvumelana. Kufuneka nje thina ukuma beqinile kuye, uze ubathobele ukwenza oko akutshoyo. Ndiyathandaza ukuba njengabantu siza kufika kunye kuYesu Igama ngobulumko, amandla nokomelela ukuze shintsha.
uYakobi • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 2:01 pm • impendulo
Wena ubukhe likhuthaze kum ekubeni kuqala Ndiye ndiliphulaphule kuwe. Ndathi ngokubanzi ukuthanda iingoma zakho, lo yandenza buhlungu ngaphezu kwayo nantoni, kwaye hayi nje ngenxa iintlekele ukufa eziye zenzeka. Yinto akukholeleki uvule kwi tv okanye ukufunda iindaba kwaye ubone yonke into sinako ukwenza okubi kweli hlabathi. Andazi nto ngayo ezo meko zikhankanywe ngokukodwa bucala koko eendaba kundixelela, nakuba mna ndithi banezimvo ezithile ngamnye. Yintoni eyona nto ibuhlungu kum le yokuba akukho bani ukuphawula intshukumo iintshukumisa ekufuneni inyaniso nokumisa ubulungisa, ezijikayo on and kunqandwa abanye, abantu abamhlophe ngokukodwa bahlinzekileyo adubule. Indlela I ndiyibone, into kuphela ekukhuthazeni ubuhlanga ngabo kuma kwiqonga kuqala enikela uhlanga benetyala. Ekuqaleni, Ndiza ukubeka iqela unamakhonkco amabali kutshanje ndiye ukufunda zokubulala ezimbi eziye zenzeka kutshanje abantu abamhlophe ngebala yi ezandleni zabantu abamnyama ngebala, kungekhona kuba ndifuna ukuba bathi abantu abamnyama ngawona oboyikisayo okanye ngaphantsi kubantu abamhlophe ngebala, kodwa ukuba nithi wonke umntu apha ohluphekayo kwaye bonke amaxhoba. Bangaphi abantu abamhlophe ngebala ungacelanga malunga nabazala run eyayivela kunye adubule? Mina ziqinisekise wena ukuba ndabeva, adubule bayazenza iimpazamo. Im singangi ukuthatha icala apha, ingongoma yam kukuba kuphela ukugcina ubuhlanga sisaphila NOT abo ekwakusithiwa makadlale intiyo nxamnye nabo wolunye uhlanga, ke esinye isenzo intiyo self ngaphandle kokuqhutywa, ubulungisa wona wahlulelwe uNdikhoyo. Kodwa xa uluntu lonke okanye iqela kuqhubeka ukukholelwa ukuba khumba kubenza nayiphi eyahlukileyo kwabanye. Abo bakholelwa izikhumba zazo ivumela ukuba enze okanye aziphathe ukulawula kwabanye okanye ibanika imvume ekhethekileyo bekhubeka. Ukugidima ulwaphulo. Ke isikhumba yethu thina aba, nokuba wakhulela Afrika okanye Mexico, isikhumba sombala yethu inkcubeko yethu okanye legacy. Andifuni ukuba wazi njengoko Trip Lee umntu omnyama, kwaye andifuni ukuba eyaziwa ngokuba uYakobi umntu omnyama, okanye uYakobi umntu omhlophe. Mna Jacob, wena Uhambo. Siya phambili nje le yantlukwano ozikhulela evuma ukuba nokuba khona. Kodwa akukho hlukanisa. bonke abazalwana. zonke odade. Bonke oonyana neentombi weNkosi. Ndicela uxolo ukuba usentlungwini indoda, nokubonga nonke nina uye waphefumlela ebomini bam!
Burton • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:13 pm • impendulo
Ingeyiyo nyaniso umzalwana, nangona mna amhlophe, Ndifuna ukuba ukungena ibhokisi kunye ya'll, aqumbe xa lila. Ndiye ndizame ilandelayo ixesha elide kwaye oku track definately omnye weenceke zam! Uthando lento uyenzayo ngokuba nathi esebenzisa iNkosi Uhambo, qhubeka.
Dayo • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:25 pm • impendulo
Coulda ubani kuye… Trip Lee * oobhontsi phezulu *
ultramarin • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:35 pm • impendulo
hey uhambo, Siyabonga ngokwabelana intliziyo yakho. Nangona mna ndingumntu abamnyama, ndize ngempela nanini ukuqonda, Ndzi ringeta ku buhlungu nawe. Enkosi ngokuzisa ingongoma ukuba amagosa amapolisa embi kwaye kwenza kube nzima ukuba 90% amagosa okulungileyo kwaye ndiyamthanda ingongoma wakho ukuba sonke emihle. efanayo ngokomfanekiso kaThixo yaye lowo apho ithemba lethu kufuneka ibe. Grace Nokuthula uMzalwana.
TBrant • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:38 pm • impendulo
Ndiva ukuba phezu amazwi umntu. Ndiyaxolisa ukuba oku kuye kwenzeka kuwe kwixa elidlulileyo kwaye ndiya imbi kuni ngathi bonke abo baye ndibandezelekile nale nobundlobongela. Ukuphila uthando uhamba nabanye, intsingiselo buhlungu nabo nilile, into ibizwa ngokuba senze ntoni na abo ukubandezeleka. Ndicela ngomthandazo njengoko mna ngoku ndizama izinto kwinqanaba buqu kodwa ndiza kukugcina kunye nabantu ababandakanyekayo kulo emthandazweni ngokunjalo. Uthando lo bhuti. Ngamana akanakuze ahlangane kodwa ndiyanithanda.
Andrew • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:43 pm • impendulo
Andiluqondi le #couldabeenme. Uhambo ndenze fan ixesha elithile, ukuba nje kuphela kodwa ezinye rap zamaKristu ziye ukuba ngoku andithethanga ngokwenzekileyo Ferguson, Kodwa ke ndibe ndaxakwa kutshanje kunye esiye Ferguson.
Ndiza kuba ngaphambili mna a 25 konyaka ubudala emhlophe. uqonde ukuba mna ukuba kunjani ukuba ligcuntswana le United States. Andiziva ngathi ndakha incothulwe phezu ngenxa yohlanga lwam. Mna andizange sele patted phantsi ngenxa yohlanga lwam. Mna andizange ukubanjwa ngenxa yohlanga lwam. Ezi zinto ukuba nzima ndithi I ukuqonda.
Nangona sithetha izinto nzima ukuqonda kukuvumela uthethe ngale tag #couldabeenme. REALLY?!? Kusenokwenzeka ukuba wena?!? Ubuya ibiwe isifunxwa kwivenkile lula yaye emva koko alwaliphulaphula a bavalelwe? Wena uya kumchasa ukubanjwa? Ubuya useke okanye onzakaliswe igosa iyunifomu ngokomzimba?!?
Nceda undixelele ukuba kutheni ufuna ukwenza ezo zinto!
Niyabona ngoxa Ndiyaqonda ukuba asinakuze sazi ukuba kunjani ukuba ligcuntswana kwi US mna ndahlala phesheya. Ndahlala eYurophu 8 kwiminyaka. Ngoxa kokuchitha ixesha eYurophu ndafumanisa ukuba yonke lizwe banenkcubeko eyahlukileyo. enye yezinto usapho lwam wafumanisa ukuba umdla kakhulu xa sidibana umntu omnyama eYurophu baba evela UK. Wonke kubo, babethetha IsiNgesi olululo ayechubekile kakhulu kwaye sembethe. Akukho namnye kubo enxibe iblukhwe zabo ngeenxa ngamadolo abo.
Ubona kukho inkcubeko eyahlukileyo apho ke zingamkelekanga kuba ulutsha enze ngathi namatshijolo. Apha kule US kukho iindima inkcubeko apho kwamkelekileyo, nokuba wamphakamisela ukwenza ngathi thug. Kutheni le nto kunjalo???
ntoni konke oku Yintoni na enam Ferguson?? Kaloku wonke ubiza eli takane uMichael Brown itakane elungileyo. Ndithetha ke baye ekholejini! Kakuhle ukusukela xa baye ekholejini ngokulinganayo ekubeni itakane elungileyo? Aka khangela izibakala wayengekho itakane elungileyo. Waye ulisela umenzi inkathazo. Ekugqibeleni akazange aphulaphule kwigunya yaye ekugqibeleni oku kukhokelela ekufeni kwakhe.
Into endiyenzayo yinkohla Trip kukuba ukuze oku kwenzeke, ngokuba “couldabeenme” unge kwafuneka ukuba benze ezi zinto nabo. Uya kwafuneka ukuba ukweba evenkileni waza walwa nalo elo wayeka emveni koko.
Ekugqibeleni, into eyenzeka ikhubekile! Nangona ingakwazanga ukuba wena. Oku wayengenakuba mna. Loo nto ngenxa yokuba 25 nonyaka ubudala. Kungenxa yokuba andiyi abazihlazisileyo ndize mna alwa bavalelwe. Zezo imiba apha. Not uhlanga.
Kori • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:46 pm • impendulo
Michael • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:48 pm • impendulo
ufefe, uxolo, uthando nenceba oluvela kuThixo wethu Daddy
Ekuqaleni, Ndingathanda ukuba badumise uYehova usindiso kunye umkhonzi hood umzalwana wakho. Wena amele kakuhle uYise. Ndivuya ndisikelelekile ukuba nguwe umzobi yokuqala ukuba uThixo wasebenzisa ukuba nefuthe kakhulu ukuhamba lam ekuqaleni usindiso lwam. Usindiswa ngoDisemba ka 2006 ndaza lilungiswe ngokunzulu kwi Hip Hop / inkcubeko Urban ukuba kwakunzima ukuba sishintshe ukumamela nje kunqulo owayephila, “I Love Music”. Kuxabise Ukuba uvavanyo kunye neengcebiso malunga ulwazi lwenkcubeko njengoko ephathelele kunqulo yeBhayibhile yaye ikwatshintsha ngayo.
Yanga ke iNkosi ikusikelele nokunyusa iziqhamo ndabulaleka!
umfundisi Bill, ubabalo noxolo kwakunye…nangona ndiyavuma ngokuphathelele ngokupheleleyo ukumelana ukubanjwa Ndiyakholelwa kakhulu ukuba kukho imigangatho ekufuneka kugcinwe yanyanzeliswa ukuba iinkqubo ezingafanelekanga / izenzo.
Michael • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 4:50 pm • impendulo
Ngokupheleleyo Walibala lokucinga ingoma. umzalwana wam oyintanda Ndikholelwa le ngoma ukujikeleza inyaniso hip hop noko yenzelwe ukuba…
Zander • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 6:10 pm • impendulo
Me mna ngokobuqu andivumelani nale ngoma. Ibonisa i ubuhlanga ukuba ngokwenene eMelika. Wonke ikhalazela ukuba abelungu zibe calulo ngenxa nje yokuba benza khona umsebenzi. Ukuba ke umntu omnyama lidubule kid (lowo bavula umpu amagosa) yamdubula akukho nto yokuba kuthiwa konke. Nje uluvo wam, ndiwuxinzelele phezu intiyo :)
jason • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 6:24 pm • impendulo
Ndiyabulela ukuzimisela kwakho ukuba bhuti ingxoxo. Thina imiba kweli lizwe ekufuneka ukuba afe onke macala kunye nendlela kuphela ukwenza ukuba ngoKristu Yesu!
Kufuneka ukuba sibonise uthando lukaKrestu wonke – ngoko ke ndibeke kunye ividiyo okuhle uthando… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
UWhitney • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 6:26 pm • impendulo
Oku kanye indlela endivakalelwa ngayo! Le amazwi amahle acwengileyo. Ukuthandaza kunye nawe bhuti! Ndiyakuthanda wena uqonde yonke inkonzo yakho.
Ben • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:15 pm • impendulo
Uhambo wayefuna nje ukuba uyazi ndiya imbi wena uze uzive undikhonzise ukuba babe yinxalenye yesisombululo. Mna umlawuli ulutsha kwicawa ipoma nabantwana ubukhulu becala abamhlophe, Ndachitha ngoLwesithathu isifundo sam ebusuku nabo yokugqibela diving ubusuku ilizwi likaThixo ngokubanceda baqonde ukuba kutheni kukho buhlungu kumacala omabini, ukuvumela uthando lonke yaye ukukhanya kaKristu ukhanye ngayo makholwa nathi, indlela nilile kulila nemihlali kunye nabo banemihlali thina. Ngoko wachitha ngokuhlwanje @ isiganeko ekuthiwa Ukholo Rx apho Kusenokwenzeka ukuba uqhelene, ukupha lo myalezo efanayo abadala. Ndiyayazi indlela eya ukuphilisa mde kubo bonke ababandakanyekayo kwaye ziya kwenziwa kuphela yokwenene xa sinikele amehlo ethu kwi uKumkani aphile njengoKristu. Mna ke uxolo intlungu kumacala omabini kunye Ndifuna nazi ukuba mna yaye ndiya kuqhubeka ukuba sithandaze ukuze utshintsho intliziyo phakathi kwabo amehlo eemfama. Gcina intloko yakho phezulu, UThixo uthembekile, ulungile, kwaye uqhubeka ukwenza oko uThixo ekusikelele nge, wena wenze umahluko.
Osakpolo • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:43 pm • impendulo
Enkosi kakhulu le ngoma ngenxa yokuba le ngcamango nayo ihamba engqondweni yam. Njenge 21 nonyaka oyindoda emnyama ubudala Boston I baqonde ukuba unokukhangela amadoda christian njengawe.
Angelique • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 7:54 pm • impendulo
Ngaba ubukhe enye zam 4 abantwana! Siyabonga UHAMBO. Ndiyathandaza ukuba abantu baya kuyeka ukuzama ukuphumelela ingxabano baze ngokwenene ukuva intliziyo yabantu zethu.
GageGuest • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:24 pm • impendulo
teip lee Intliziyo yam buhlungu kwakhona emva kokubukela le vidiyo entsha indoda gettin chocked ekufeni.
I ngobuxoki ukugwebele guys ku ngokuthetha. Ndajonga kuyo ngaphandle kokuba abantu zonqulo ukujonga endaweni umthetho ukuba nithandane. Ndicela uxolo ukuba abazalwana Yesu ndiye kugwetywa ubunzima esoniwa.
Ndiyazi ukuba andiyi mna ogqibeleleyo kwaye kufuneka ooThixo uthando zonke. Uye waba belolonga kum. Ke ubomi bam namhlanje ngenxa yesifo nexhala esibi. Ndandicinga ukuba ndiza kufa, kodwa akazange avumele ukuba.
Mna ndiza kwahlula andaba yonke media lwam lasekuhlaleni (ukuyisusa) ukuze babe kufutshane ndihambe noYesu ngoMoya nangenyaniso!
Ukuba ufuna ukuthetha okanye unazo naziphi na iingcebiso inombolo yam 580-509-5059
Mauricio Arriaga • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 10:45 pm • impendulo
Ngaba nindithandazele bro ngokwenene oza kuzifunda ndiziva Iike kufuneka ndinabo ngaphezu yothixo kuba andinayo ngokwaneleyo ngaye mna a 13 konyaka ubudala evela Kerman California nani guys imodeli yam indima mna a christian kodwa qhubeka ndisiya emva sisono Ndidiniwe yokubaleka esonweni ndifuna ukutshintsha ubomi bam Ndifuna ukuba usisidalwa esitsha ongayenza Sithandazela ukuba uthixo akusebenzi kum ukuze ndibe ngumKristu ngcono <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patricks Ny Jr. • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 12:06 mna • impendulo
Mna Andiliphulaphulanga ingoma kodwa amazwi athi nje lonke yaye ndiyazi ukuba ingoma isizathu esilungileyo yiloo nto konke okusemandleni. UThixo anisikelele ngakumbi
NicholasTracy • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 1:30 mna • impendulo
Ekuqaleni, ezo zithuba, Andizange ndiyifumane. I yavele nje wacinga ukuba ikruqula, kwaye Andinalunda kakhulu ukuba ngoku. Emva kokuphulaphula le ngoma kunye kukhululwa yakutshanje Derek Minor kaThixo, I sikhumbule ukuba ubabalo indima enkulu yale, kwaye part I kulahleka kakhulu. Andizange ixesha lokucinga ngayo ngezindlela ezahlukeneyo. Ngenxa efumileyo guy emhlophe ukuya eyunivesithi, I kwaba nzima ukuqonda ixesha ukuba wajonga ngokwahlukileyo ngabanye, wena nam. nokuba, kanye ndathatha ixesha ukwenza njalo, Amehlo am avuleka kwindawo eyahlukileyo ndawo Ndakhe ndaya ebomini bam yonke. Ndifuna uxolo ngokunyanisekileyo kuba ukuthatha elo xesha ukubona izinto ngeliso lakho, yaye ndifuna ukuba ukukhuthaza wonke ukuya konke oku lubabalo engqondweni. Eyona nto ibalulekileyo. Ndiya kubulela kuwe, obhale le ngoma, Derek Minor sokukhululwa kwakhe, nabo bonke abasebenzi 11Six abathethe malunga nalo mba kwaye babelane ubulumko babo.
Kentrel • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 1:58 mna • impendulo
Trip Lee uthando olukhulu kule ndoda ngoma kungekho buxoki. Siye kwakufuneka olu hlobo ngoma ukutsala iintloko zethu ngaphandle emdaka, ubone oko uThixo afuna ukuba senze. Endikuyo ebufundisini bam ukwenza nengoma enjengeyobusuku kanye lo mntu. Ngamana uThixo kusinceda sonke ngeli xesha nzima.
Edward • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 8:11 mna • impendulo
Mna umfundisi kwicawa kwidolophu encinane Arkansas kwaye musa wayeka ngamapolisa ngaphandle kwesizathu……..kwakhona. Oko kuye bekungasoloko kunjalo. umzalwana wam samiswa bayityela aphume emotweni ngabathwali bempa- kwaye sonke wenza drive ibe yidolophu kumantla Wisconsin. Sasi 19 okanye 20 iminyaka ubudala. kwiminyaka emihlanu engaphambili ukuba uhamba ekhaya kwaye imoto yamapolisa ngokucotha thina trailed ukuba iibhloko ezintathu okanye ngaphambi ukumisa thina. Bathi ke wayefana abanye abarhanelwa xa kukho umphanga.
Ndathi ke akwenzeki kwakhona ukukholelwa ngokupheleleyo ukuba namanje kwaye izinto ngokukhawuleza ukuya neze.
Ndaziswa Hip Hop nguMkristu KAA kwaye umamele amagama iingoma akho lonke ixesha. “phakama” liyabanda, kubanda, kubanda.
amazwi akho ndithetha inyaniso ngoKristu ngesibindi yaye 116.
Ndiyabulela la mazwi ngqindilili kujongwe umfanekiso enkulu kwaye ndahlukane naye kugxila nesiganeko enye.
Xa uthe wonke umntu omnyama omaziyo uye wakubona oku…Mna omnye wabo.
Fikelela ukuba kwam nanini.
Qhubeka ukushumayela umzalwana.
OtiatoMargy • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 10:06 mna • impendulo
Yintoni umhlobo esinayo uYesu; BONKE izono zethu kunye izifo ukuba athwale, sonke ngenxa yokuba thina akukho ukuthwala YONKE INTO kuThixo ngomthandazo.. Kunzima KODWA uThixo angakwazi ukukhusela ukuba sinikele namandla ethu ngokupheleleyo ubabalo lwakhe, ukuba wanele. Sinako ukubuza imibuzo emininzi, kumbuzo uphawu lwethu njl, kodwa silahlekelwe zonke iimpendulo uThixo sele enikwe kwiLizwi lakhe ukuba nje thina Ziphengululeni izibhalo. Ukuba ukhe kuyimfuneko uThixo, ke ngoku ukuba ukholo, njengoko siluqonda iinkqubo siyathemba ukukhusela ukuba nakanjani. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi ufumaneke eluncedo kakhulu ngexesha elililo… Ithemba lethu eNkosini uThixo eBhayibhileni ngoYesu iNkosi yethu noMsindisi nenkosana yoxolo, ukuba ngenxa yezi zizathu Wathabatha indawo yethu siza kufa ukuba unikholekise Othandiweyo kwaye ukuba ikhululwe kungakhathaliseki ukuba iyantlukwano yethu. Akukho mfuneko yakulinda omnye isiganeko ekugqibeleni kweli zinga, makhe sibuyele kuThixo, uthando lwethu lokuqala. Siye ukumyeka kodwa yena akazange asishiye. Ulindele, ukuba ndiyipholise imivumbo zethu ukunxiba nathi lwasebukhosini thina kanjalo enesidima njengabantwana bakhe abazange ehlazeka njengamakhoboka abangenalo amalungelo. UThixo kabawo wethu, singabakhe, He is a uTata onoxanduva sidinga kuYe! Uye sonke kufuneka kuquka amalungelo oluntu!
Sammychris68@gmail.com • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 10:10 mna • impendulo
Its nje kuphela american, kwenzeka yonke indawo kwihlabathi…Ndiphinda ndingqina apho umzalwana elinyukayo umzalwana wakhe alife amanye yi petrol kuba yena a christian ngoxa Muslim, apho 3 umfundi elimsulwa apho iseti ngomlilo ukuze ulwaphulo-mthetho ukuba ningenzi in portharcourt Nigeria, apho ukuzibulala bombing lwenzeka, apho amajoni babulala yonke ngummi asekuhlaleni isizathu yezopolitiko, Nigeria yenye lizwe izinto zasemzini eziya kwenzeka bibble kwenzeka. Kufuneka imithandazo ur ehlabathini lonke…Ukuphila Muslims akukho lula.
MargureteMensa • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 2:31 pm • impendulo
Whatev. Nali icebiso: quitcherb * tchin, akhule kunye negalelo into entle eluntwini ngaphandle self ukuzikhathalela iimvakalelo zakho. Kwaye indlela phezu kunako.
Marchauna • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 3:07 pm • impendulo
Ukuba ilungelo ukuva kuni WinterJam eSpokane, Washington waza wasikelelwa gqitha umculo wakho. Wahlola website yakho namhlanje, wabona iposi yakho Ferguson. Enkosi ngokwabelana. kutshanje kuphela UThixo wawavula amehlo am, ukuba ubunyani ubuhlanga nocalucalulo kwi-US kunye eBandleni. Uye yaphula intliziyo yam, naswona ndzi ringeta ukufunda kangangoko ndinako ukuze ndikwazi ukuba Biblical, UThixo edumisa sengqondo. post lakho wandichukumisa ngokunzulu yaye kundenza ndibe nento ukwabelana nabazalwana noodade abantliziyo namehlo ziye kwanini kodwa. Bethandazela Rev 7 Church kunye uMoya Oyingcwele uzise enetyala abantu baKhe “i West”. Nceda musa ningadinwa okanye sinikezele kodwa…uMzimba kaKristu idinga umyalezo wakho, umbono, nangothando.
fundmc • EtiMnga 5, 2014 ngexesha 3:17 pm • impendulo
Uthando umyalezo esikhuthazayo. Kufuneka sihlale ukholo lwethu eNkosini kwaye ukhumbule ukuba babelane Iindaba Ezilungileyo amaxesha bezama.
L • EtiMnga 6, 2014 ngexesha 11:33 mna • impendulo
uhambo, enkosi kakhulu. Enkosi ukuthanda abanye xa wacaphukela kuwe. Enkosi ukufumana intliziyo kaKristu ngenxa ibandla lakhe – enye ohlangeneyo – nokuhamba njengaye, xa kunzima naxa kulula. Ndiya kukuzukisa wena kunye nosapho lwakho kunye ezinzulwini usuke wena uye ukuthanda kakuhle uYesu. Enkosi.
UKathleen • EtiMnga 7, 2014 ngexesha 3:11 mna • impendulo
I nje lidibane oku kunye wanna bathi impendulo yakho siyinyaniso, ngokusuka entliziyweni Nakukubona. Ndiphinda ndingqina ukuba uhlelwe uze uve ubunzima kunye nawe. I liyayiqonda enkulu kulo ngenxa kwisini sam. Makhe ungambona imini xa ukufikelela abantu ngokusekelwe koko ngaphakathi khangela ubuhle ukuba kukho.
Margurete • EtiMnga 7, 2014 ngexesha 12:27 pm • impendulo
Kulungile, ngoko ndibona ihamba njani le. Ekuqaleni, I guess zonke izimvo athunyelwe kufuneka ibe wakhetha lusizi ingoma yakho sappy ikhala okanye musa athunyelwe. Ngoko kubonakala na wena okanye omnye lakho (HIV) amazwana uyithathaphi isigqebelo kwinto yokuba ngokoqobo amawaka abantu kutshabalala mihla ehlabathini lonke ukususela umntu ngobundlobongela umntu kodwa omnye ngaphezu ubunzima, indoda abanesifuba omnyama esifa ngoxa uxhathise ukubanjwa, sihlelwa kuko ibambeke kwi camera kwaye ngoku sainted kuye, wayedlala ikhadi ngokobuhlanga, wayekhalazela zonke amapolisa lonke njengokuba ngokugqithiseleyo enamandla wabiza ukuba kwimvukelo kazwelonke. umbuzo nje omnye: ukuba lo mntu babesebenza nzima ukuze baphile ukuba yena nosapho lwakhe lomthetho, esisemthethweni fashion ngenye wesintu endaweni umsebenzi yoyolo mthethweni ukuba yena ukuba ngendisaphila namhlanje ukuba? Ubuncinane siya kusindiswa self nofefe lwakho sappy.
WhiteVictim • EtiMnga 8, 2014 ngexesha 4:05 pm • impendulo
Mna ndiyindoda emhlophe osebenza ulutsha beentlanga ezahlukahlukeneyo neemvelaphi. Ngelo xesha, 80% weqela umnyama kunye ingoma yakho esona mna. I uthenge iikopi ezininzi ze CD kaThixo wakho ukuba ukuba eli qela kodwa kungekho ngaphezulu. Icala flip wengoma yakho “Kusenokwenzeka ukuba mna” kukuba wena ngokwenene wayekutsho, “Kusenokwenzeka ukuba nina” (umntu omhlophe) ngubani na ukuba wenze le nto kum (umntu omnyama). Nina akalikiweyo umba yokwenene entliziyweni kwaye oko SIN. Njengoko artist ongumKristu ufanele wazi ngcono kodwa okwenzayo abanye benza: wena lisebenzisa ekuswelekeni abanye ukuba athengise umculo wakho uze wenze imali. Nina zazi ngokwahlukileyo ukusuka Al Sharpton. Nceda ufunde ibali yodlwengulo & ukuxhela sibini Channon Christian emhlophe, 21, nesoka uChristopher Newsom, 23 ezandleni zabantu kwenzeka ukuba abamnyama. Eli bali engazange sematheni kuba ukufa owoyikekayo abamhlophe musa kuthengisa amaphepha okanye iingoma rap. Kusenokwenzeka ukuba wena kodwa ngokuqinisekileyo yenzeka kubo. Ngoko ke, kutheni na ukuba ukucula ngalo. ngethemba, uya kuvumela oku ithunyelwe kwaye zisala iposelwe.
Tom • EtiMnga 8, 2014 ngexesha 10:54 pm • impendulo
Wowu. Kufuneka ube lusizi lokuba isisulu ubomi bakho bonke. Usizi uthanda ngokuqinisekileyo inkampani, nangona.
ingoma zakho phantse wenza ukuba ndimsizele ngokwam kakhulu ingqalelo yonke into eyenzakalisayo zakwenza kum. Yintoni umahluko phakathi kwam nawe? Ndikhetha ukufunda kwixesha elidlulileyo, badlulele. Mhlawumbi Mna ephosakeleyo. Mhlawumbi I owoniweyo. Yintoni.
Ndithi ndinamandla ngaphezu koko.
p.s. Ndingu wesilisa, kwaye nam baye ukuxambulisana zokunyanzelisa umthetho eseyintombazana nakanye amacala. Ndiyambulela uThixo kuba bonke abo izimo nendlela ndafunda kubo.
Thomas • EtiMnga 10, 2014 ngexesha 11:38 pm • impendulo
Trip Lee kunjalo ukukhanya ngebala, kokuba kudlule mhlophe. Umfazi wakhe kunye abantwana nazo amhlophe ufuna. njani yena ibango ukuba abamnyama ngokwenene okanye amava efanayo abantu abamnyama.
Ewe mna abamhlophe yaye ndiyazi ukuba ubomi nzima abantsundu ngesikhumba emnyama.
Yiza leNkosi uYesu!
Trip Lee • EtiMnga 22, 2014 ngexesha 1:59 pm • impendulo
Le mazwana emkhathazayo kwaye ibonisa umncinane kangakanani na ukuqonda ngobomi kubantu abamnyama baseMelika
uLori • EtiMnga 21, 2014 ngexesha 4:14 mna • impendulo
namhlanje, ukususela ukuxhela amagosa amabini NYPD, ekugqibeleni Ndandicinga ukuba ndiza ukukhangela nevidiyo Eric Garner_I wabukela ngayo, Mna ndiza kukwazi kuphela ukubukela kube kanye; Mna ngokugqithisileyo nezifo-bakholelwa!! Iinyembezi aqukuqela….indlela bayazi nesibindi namarhataa, indlela Dar nabo !! Ndiyazohlwaya ngenxa intsapho Eric kaThixo, kunye nabahlobo. Ndiyayiqonda ukuba eneneni umntu omkhulu, elihle, ukupha umphefumlo. RIP Eric Garner.
Mna a female White, kweva 50 ka-, Andizange ababehlala kwizixeko ezifana apho Eric wenza. Mna nelungelo nayiphi na indlela; Ndiyisebenzela nzima, babe nobunzima ekwenzeni ekupheleni siyahlangabezana; Mna engalunganga kwindawo yomsebenzi; ngokoqobo uxhatshazwa, adubula, isihlandlo ngaphezu kwesinye; I abanalungelo, akukho mntu khathalayo, i EEOC, kuyinto crock of ….! Kubo bonke ubomi bam, Ndiye ngokubaleka okanye ezimbini ipolisa nekratshi; kodwa, Ndiye amava kunye amagosa amapolisa amaninzi elungileyo. Kukho asikho isizathu esilungileyo ngokwaneleyo ukuba izenzo alicebileyo Eric; yena woniwa SO, yaye ziyindlela abulala ezandleni ipolisa nekratshi. Andikwazi ukuqonda ukusilela kwinkqubo yethu yezomthetho; Mna ndinganyikimisi nje intloko yam, Andazi ukuba mandithini; ebukele le iindaba, kunye nokumamela ukuba stories_it repulses mna! Abazali bam wandikhulisa ukuba angaboni umbala(s)… thina sonke enye; sonke zivela iinkalo ezahlukeneyo zobomi; abaninzi bethu imizabalazo, imizabalazo emininzi ubomi; kodwa igazi efanayo fumanisa emithanjeni yethu. Nangona, Andizange sichasa “kwicala elingafanelekanga umthetho;” umzalwana wam uye, ke ukuba i White, wenza ixesha elithile entolongweni(10yrs) ngokuba ezithile zolwaphulo-mthetho ezingaxhomisi ukuba nophondo ngokupheleleyo zinkulu; uye waphuma malunga 15yrs ngoku; kwakufuneka apho isongo iqatha awhile(2yrs,) ngokuba yaba sisizathu sokuba namarhataa basekuhlaleni ukuze simazi kakuhle, nobunzima naye, njalo, ngela xesha. Kuye 15yrs, nge NO imiba, kwaye usatsho nangoku ithi hassled kule mini, ngayo ayinyamezeleki; ke nangoku ngokuhlawula ukuba ulwaphulo-mthetho, nangona sele kugqityiwe kakuhle ixesha lakhe. Asinto nje Black ingxaki, ke zonke ingxaki yethu. Kukho kangaka engalunganga kakhulu into namhlanje, kanye kukulawula, thina ngokwenene musa ukuba amalungelo…kuba ukuba ngaba oko ukwenza ngendlela eyiyo ngoko engalunganga nathi, zinokohlwaywa ngendlela ethile okanye enye. Nangona, kukho abantu abaninzi ababi kweli hlabathi, ngumntu lowo bengawuxabisi ubomi bomnye umntu, amasela, okule yonke imibala; kufuneka amagosa amapolisa ukuze ulwaphulo-mthetho ekulweni; benza engozini kukho ohlala imihla emininzi; kodwa kwabo, inqanaba labo amandla, ukungabi ukuphulaphula abantu, nemvo yabo cockiness; kubalulekile kakhulu akusoloko kunjalo kwenu unetyala, kuze kube msulwa, kunye nabantu lonke eli kwisizwe uphathwa ukuba ngaphantsi kunolo igosa lamapolisa(“umthetho.”) KUFUNEKA STOP! zethu “kakhulu” isizwe, ayikho ngokwenene mkhulu kangaka ngeli xesha…kuqalwa kunye norhulumente, empompoza phantsi emapoliseni lendawo.
Buyela Eric, kwakhona, Ndiyaxolisa, belusizi usapho kunye nabahlobo bakhe. I umcimbi misfortunate kakhulu…Ndiyathemba ukuba ukuzingisa intsapho yakhe uya kufumana ezinye ubulungisa, Kakade ke akanakuze indawo Eric.
Ngamana uxolo malube nani nonke.
uLori • EtiMnga 21, 2014 ngexesha 4:20 mna • impendulo
Umhlathi wesibini ibimele ukuba bathi nje ukuba nelungelo nayiphi na indlela! Eish.
AJ • UTshazimpuzi 8, 2015 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Andazi nokuba uyazi ukuba uqale apho. Yiloo nto kanye indlela endivakalelwa ngayo yaye mna nkqu American kodwa ukuba abamnyama, sisazi ukuba abantu uyatshutshiswa uze ngisho babulawa igunya kubuhlungu nje intliziyo, uze ukwazi ukuba igunya efanayo wahlukane enjalo yenza kube nzima ukukholelwa kuyo nayiphi na inkqubo yobulungisa, ngenene. Ndiyavelana kunye neentsapho ezibandakanyekayo nabachatshazelwe, ethathela amaxhoba okanye abenzi icala.
uTammy • UTshazimpuzi 9, 2015 ngexesha 6:31 pm • impendulo
benza Amaphoyisa Bad kube kubi ukuba adubule elungileyo.
Kianna • UCanzibe 20, 2016 ngexesha 4:35 pm • impendulo
Trusted Online In Indonesia • EyeKhala 17, 2017 ngexesha 5:39 pm • impendulo
Ndiyakuthanda ukufunda inqaku eya kwenza abantu bacinge.
ngokunjalo, enkosi ngokuvumela ukuba izimvo!
amanqaku omculo • EyeKhala 19, 2017 ngexesha 12:25 mna • impendulo
kodwa, yena wahlala enyanisekile umculo wakhe waza waphila ngokwaneleyo elide ukubhala phezu 800 amaculo ze uve Imiculo bakhe enyukela
ukusuka pews kumqolo wokuqala nenqwelo choir, apho ngaphambili
kuvaliwe. Onamandla computer, ezinye mics, a wedesktop digital yomsindo, kwaye kancinane ukwazi,
nabani na ukurekhoda nasekuhambiseni umculo. kodwa
ngelo xesha, kokufika intanethi, broadband, arekhodiweyo abe nangaphezulu
abadlali media eziphathwayo kukhokelele utshintsho olululo kolu shishino.